बुद्धिमत्ता - संज्ञानात्मक प्रशिक्षण
सिंक्रोनस कोर्सहरू (जूम)
एसिन्क्रोनस कोर्सहरू (आजीवन पहुँच)
बचपन र किशोरावस्था
टाइप गर्न सुरु गर्नुहोस् र खोजी गर्न प्रविष्ट थिच्नुहोस्
यो सुधार गर्न रणनीति को मूल्यांकन देखि बुद्ध, सम्बन्धित लेख को संग्रह
दिमागको "जिम्नास्टिक" का लागि उपयोगी सुझावहरू दोस्रो भाग: लुमोसिटी
न्यूरो-संज्ञानात्मक पुनःस्थापना र कार्यकारी कार्यहरूको प्रशिक्षणको लागि संसाधनहरूको समीक्षा जारी राख्दै, त्यहाँ केही धेरै उपयोगी अनुप्रयोगहरू छन् जुन [...] मा स्थापना गर्न सकिन्छ।
दिमागको "जिम्नास्टिक" को लागी उपयोगी सल्लाहहरू: कोग्निटिभफन
वेबमा खोजी गर्दै त्यहाँ धेरै संसाधनहरू छन् (नि: शुल्क र नि: शुल्क) जुन न्यूरोक्ग्नेटिभ पुनःस्थापना र कार्यकारी कार्यहरूको प्रशिक्षणको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यिनीहरू मध्ये एक [...]
के प्रतिभाशाली बच्चाहरू पूर्णतावादीहरू हुन्?
विशिष्ट शिक्षा विकारहरूमा बौद्धिकता: अतिरिक्त उपहार बढी पटक छ?
बौद्धिक प्रदर्शनमा आईक्यूको प्रभाव: स्कूलको शुरूदेखि अन्तसम्म
के एपिसोडिक मेमोरी र मौखिक प्रवाहले संज्ञानात्मक गिरावटको पूर्वानुमान गर्न सक्दछ?
ADHD र IQ। कुन पक्षले स्कूलको प्रदर्शनलाई असर गर्छ
रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता र कार्यकारी कार्यहरू बीचको सम्बन्ध
उच्च संज्ञानात्मक सम्भाव्य र विशिष्ट शिक्षा विकारहरू
डा। इवानो एनेमोन
न्यूरो साइकोलोजिकल मनोवैज्ञानिक
भ्याट नम्बर: १२२12727841004००393920153949 दूरभाष: +XNUMX
डा। एन्टोनियो मिलानीज
भ्याट् नम्बर: १२03350991208२XNUMX००XNUMX
यो काम इजाजतपत्र अन्तर्गत वितरित गरिएको छ क्रिएटिव कमन्स एट्रिब्युसन - गैर वाणिज्यिक - कुनै व्युत्पन्न कार्यहरू 4.0 अन्तर्राष्ट्रिय.
प्रतिलिपि अधिकार सबै अधिकार सुरक्षित © 2020
यस साइटले तपाइँलाई अझ राम्रो ब्राउजिing अनुभव प्रदान गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ। यदि तपाईंले यो ब्यानर बन्द गर्नुभयो भने, तपाईं कुकिजहरूको प्रयोगमा सहमत हुनुहुन्छ। तपाईले जानकारी पछि समीक्षा गर्न सक्नुहुनेछ मेनु पट्टीमा कुकिज नीति लि following्क पछ्याएर।स्वीकार कुकी नीति
गोपनीयता र कुकीज नीति
यस वेबसाइटले तपाइँको वेबसाईट मार्फत नेभिगेट गर्दा तपाइँको अनुभव सुधार गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ। यी कुकिज मध्ये, कुकीहरू जुन आवश्यक रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ तपाइँको ब्राउजरमा भण्डारण गरिन्छ किनकि ती वेबसाइटको आधारभूत कार्यक्षमताहरूको कामका लागि आवश्यक छन्। हामी तेस्रो-पक्ष कुकीहरू पनि प्रयोग गर्छौं जसले हामीलाई यो वेबसाइट प्रयोग गर्ने विश्लेषण गर्न र बुझ्न मद्दत पुर्‍याउँछ। यी कुकीज तपाईको ब्राउजरमा तपाईको सहमतिले मात्र भण्डारण गरिन्छ। तपाईंसँग यी कुकीज अप्ट-आउट गर्न विकल्प पनि छ। तर यी कुकीहरूको केही अप्ट आउट गर्नाले तपाईंको ब्राउजि experience अनुभवमा असर पर्न सक्छ।
सँधै सक्षम गरिएको
आवश्यक कुकीहरू वेबसाइटको राम्ररी काम गर्न आवश्यक छ। यस श्रेणीमा कुकीहरू समावेश गर्दछ जुन वेबसाइटको आधारभूत कार्यक्षमता र सुरक्षा सुविधाहरू सुनिश्चित गर्दछ। यी कुकीजहरू कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी भण्डारण गर्दैनन्।
कुनै पनि किकिहरू जुन वेबसाइटको लागि विशेष रूपमा आवश्यक नहुन सक्छ र विशेष रूपमा प्रयोग गरीएको व्यक्तिलाई एनालिटिक्स, विज्ञापनहरूद्वारा अन्य व्यक्तिगत डेटा संकलन गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो कुकीज तपाईंको वेबसाइटमा यी कुकीहरू चलाउनु अघि प्रयोगकर्ता सहमतिलाई अनिवार्य छ।
स्वीकार गर्नुहोस् र बचत गर्नुहोस्
त्रुटि: सामग्री सुरक्षित छ !!